IKoi fish quartz - Isibuyekezo esisha 2021 - ividiyo enhle
I-Koi fish quartz itshe elisho futhi izakhiwo ze-crystal.
Thenga ama-quartz emvelo emvelo e-Koi esitolo sethu
IKoi fish quartz iyitshe eliyigugu elingandile. Okubomvu nokusawolintshi ukufakwa kwe-hematite. Umbala okhanyayo wokuqukethwe kwensimbi osekune-oxidized. I-Hematite ne-quartz kuvame ukutholakala ngokwehlukana, kepha kuyaqabukela kuhlangane.
Incazelo yetshe le-koi fish quartz kanye nezinzuzo zokuphulukiswa kwe-crystal
I-quartz yezinhlanzi ze-Koi ngaphansi kwesibonakhulu
I-Hematite, nayo ebhalwe njenge-haematite, iyi-iron oxide ejwayelekile enefomula ye- I-Fe2O3 futhi isabalele emadwaleni nasemhlabathini. Amafomu we-Hematite abukeka njengamakristalu ngohlelo lwe-rhombohedral lattice, futhi inesakhiwo se-crystal esifana ne-ilmenite ne-corundum. IHematite ne-ilmenite benza isixazululo esiqinile ngokuphelele emazingeni okushisa angaphezu kuka-950 ° C.
IHematite inombala omnyama kinsimbi noma isiliva-grey, nsundu ukuya obomvu ngokubomvu, noma obomvu. Iqhutshwa njenge-ore main iron. Izinhlobonhlobo zifaka i-ore yezinso, i-martite, i-iron rose ne-specularite. Ngenkathi lezi zinhlobo zihluka, zonke zinodaka olubomvu lokugqwala. IHematite inzima kunensimbi emsulwa, kepha iyisihlahla esiningi. I-Maghemite iyimaminerali ehlobene ne-hematite- ne-magnetite ehlobene ne-oxide.
Izinhlayiya ezinobukhulu be-hematite zingavela futhi njengamaminerali wesibili aklanywe ngezinqubo zezulu emhlabathini, futhi namanye ama-iron oxides noma ama-oxyhydroxides anjenge-goethite, anecala lombala obomvu wenhlabathi eningi eshisayo, yasendulo, noma eyenye.
I-quartz yezinhlanzi i-Koi iyinhlangano yamaminerali eqinile, ekristalu eyakhiwe ngama-athomu e-silicon ne-oxygen. Ama-athomu axhunywe ohlakeni oluqhubekayo lwe-SiO4 silicon oxygen tetrahedra, lapho umoya-mpilo ngamunye wabiwa phakathi kwama-tetrahedra amabili, okunikeza ifomula lamakhemikhali jikelele le-SiO2. I-Quartz iyimbiwa yamaminerali yesibili eningi kunawo wonke emhlabeni, ngemuva kwe-feldspar.
I-Quartz yaziwa ngokuthi umphilisi ophambili futhi izothuthukisa amandla nokucabanga, kanye nomphumela wezinye amakristalu. Iyamunca, igcina, ikhiphe futhi ilawule amandla. Sula i-Quartz ikhipha amandla amabi azo zonke izinhlobo, ihlukanise imisebe yangemuva, kufaka phakathi i-electromagnetic smog noma i-petrochemical emanations. Ilinganisa futhi ivuselela izindiza ezingokomzimba, zengqondo, ezingokomzwelo nezingokomoya. Ihlanza futhi ithuthukise izitho nemizimba ecashile futhi isebenze njengokuhlanza umphefumulo okujulile, ixhume ubukhulu bomzimba nengqondo. Kuthuthukisa amakhono obuhlakani. Kuyasiza ukugxila futhi kuvule imemori. Kushukumisa amasosha omzimba futhi kulethe umzimba ukulingana.
I-quartz yezinhlanzi ze-Koi yemvelo iyathengiswa esitolo sethu
Senza ubucwebe be-koi fish quartz obenziwe ngokwezifiso njengamasongo wokuzibandakanya, imigexo, amacici e-stud, namasongo, imihlobiso elengayo… Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.
I-Koi fish quartz 1.69 ct
I-Koi fish quartz 2.02 ct
I-Koi fish quartz 3.07 ct
I-Koi fish quartz 3.15 ct
I-Koi fish quartz 3.47 ct
I-Koi fish quartz 5.36 ct
I-Koi fish quartz 5.56 ct